Spice Plum achicha Ntụziaka | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
A plọg paụ adụ mgwakota agwa, kemmiri ihe na-ejuputa na a oseose uto, nke-enye pawuda и ginger. Achịcha na-atọ ụtọ na achịcha dị ụtọ, ọ gaghị ekwe omume ị takeụ ihe mgbakwunye!
Efrata maka Plum achịcha - Ntụziaka
okpete (agba aja aja) - 1 tbsp. l;
ude mmanụ - 20 gr.
Maka nnwale achịcha:
ntụ ọka - stack 1, hapụ ya;
ntụ ịme achịcha - 1 tsp. (hapụ ya na ntụ ọka);
akwa - 1 pc;
mmiri ara ehi - 1/4 tojupụtara;
aja aja shuga - 3 tbsp. l;
mmanụ aṅụ - 50 ml;
pawudahama. ginger - 1/2 tsp.
Ntụziaka maka ime plọm plọm - uzommeputa
1. Kpoo ọkụ ozugbo iji kpoo 180 Celsius. Kpuchie ala nke ebu na jiri akpụkpọ anụ jiri dayameta nke 12 cm cm 27. E kwesịrị iwere akwụkwọ ya ka akụkụ ya wee fegharịa n’elu mpempe akwụkwọ ahụ. Werezie bọta ahụ, ma jiri mkpịsị aka gị na-eme ka ọ dị nro, ghee akpụkpọ anụ ahụ na ebu. Wụsa shuga na ike okpete - 1 tbsp. l
2. Belata pọọm maka achịcha ahụ, gbanye ya n’elu shuga - gbue.
3. Akụkụ bọta, maka ntụ ọka, gbazee na mpekere. Tinye shuga na mmanụ a brownụ na-agba aja aja na ya. Esi nri, na-agbanye n'ihu, na obere ọkụ. Ruo mgbe shuga na-agbari. Wepu ya na onye na-ere oku ma kpoo sirop (15 min).
4. Na-esote, dịka ntuziaka maka achịcha ahụ si dị, wụsa mmiri ara ehi n'ime sirop mmanụ a andụ ma tie akwa. Gwakọta ya na mmiri wụsara ma tinye ntụ ọka ahụ na-acha ọcha, na-esochi ntụ ntụ, ngwa nri na-esochi ya.
5. weta uka ahụ na spatula gaa n'usoro mebere ma nyefee ya na plọg ahụ, tuo ya. Ebe 40-43 nkeji n'ime ite dị ọkụ.
6. Lelee bred na achicha achicha (egwuregwu), nke kwesịrị ịpụta na mgwakota agwa - mgbe ịpacasịrị - kpọnwụọ kpamkpam.
7. Wepu plọg a kwadebere na ngwa nri site na oven, mgbe o jiri nkeji 10 tinye eriri igwe, dị jụụ - ma tinye ya n’elu efere. Bee n'ime iberibe. Na-eje ozi na tii dị ọkụ.
Soro ndị enyi na netwọrụ ndị na -eme ngwa nri plọm pusi - ọ bụghị esiri gị ike, ndị enyi nwere obi ụtọ!
Ajuju 19 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,337.